Qabyaaladdu kululaa | allsanaag
Xikmaddii Xaaji Cawad Cismaan ee ahayd ” Allah qabyaaladdu kululaa” oo madaxda SNM bililiqaysteen
Allah ha u naxariisto Xaaji Cawad Cismaan, burburka ka hor, waxa uu ahaa ganacsade ay xaruntiisu ahayd magaalada Hargaysa ee gobolka waqooyi galbeed, Wuxuu lahaa Basaskii Muqdisho iyo Hargaysa u kala gooshi jiray. Wuxuuna ka soo jeeday gobolka Sanaag.
Maalin maalmaha ka mid ah Xaajiga oo fadhiya Huteelkiisii Sanaag ee magaalada Hargaysa, oo sidii caadaddu ahayd la fadhiya koox ka timid degmada Badhan oo halkaas ku qayilayey ayaa Xaajiga waxay ku yiraahdeen ”Xaaji maalin walba dukaankan inaga soo hor jeeda ayaa cabitaanka ama Kookaha lagu qayilayo inooga dalbtaane, maanta Dukaanka reerku leeyahay, ee aan inaga fogayn maad maanta inooga dalbataan cabitaanka .
Dukaanka horay looga dalban jiray Kookaha ee huteelka ka so hor jeeday waxa lahaa Xaaji Daahir Cabdulaahi, oo ka soo jeeday beesha Gudabiirsey, halka dukaanka kale ee cusub ay lahaayeen qoys Warsangeli ah.
Xaajiga waa ogolaaday codsigoodi ahaa in Dukaanka reerku leeyahay in looga soo gado Kookaha. Wax yar ka dibna wiil yar ayaa loo diray inuu halkaa soo gado Kookaha.
Markii uu Kookihii laga soo gaday Dukaanka Warsangeli markii ugu horaysay ee la keenay huteelkii Sanaag, ayaa qasacaddii ugu horaysay waxa furay oo rabay inuu cabo Xaaji Cawad , markii uu furay qasacaddii cabitaanku waxay ahayd mid kulul oo aan laga soo saarin Talaakad , waana xunbo badnayd kulayka awgiis, markaas intaasi dhacday oo huteelka lagu dhan yahay dad safar ah iyo dad magaalada joogayba ayaa Xaajigu hadalkan dhaxal galay yidhi ”Allah Qabyaaladdu kululaa”. Dukaankii hore cabitaan qabow ayuu gadi jiray kan cusubi talaakad ma lahayn . Qabyaaladna waa looga yimid.
Ugu danbayntii sheekaddii sidaas ahayd maanta waa la bililiqaysatay oo magcyo kale ayaa loola baxay. Sheekadu waxay u dhaxaysay Reer Sanaag iyo Reer Awdal. Maanta meelo kale ayaa lala aaday
← Khatar caafimaad Maqaamka Gobolka Banaadir Maahan In madaxweyne Farmaajo hadda Olole doorasho Ku galo . →